Bukela Isiteshi Sokusakaza Se-JW Nge-Roku | Okukhona Nosizo
Ingxenye ethi Ama-Video Athandwayo ikuvumela ukuba ubuke noma yimaphi ama-video aseSiteshini Sokusakaza Se-JW futhi uwalawule ngokuphelele (ungama kancane, ubuyele emuva, uye phambili, uye kwelandelayo). Bukela i-video eyodwa noma wonke akulolo hlu.
(Phawula: Imidwebo ye-remote ye-Roku 3 ikhona kulesi sifundo. I-remote yakho ingase ihluke kancane.)
Khetha ingxenye ethi Ama-Video Athandwayo ekhasini lokuqala leSiteshi Sokusakaza Se-JW ukuze ubone ama-video atholakalayo emikhakheni ehlukahlukene. Landela izinyathelo ezingezansi ukuze uthole ama-video futhi uwabukele:
Lawula Ukudlala Kwe-Video
Bukela Ama-Video Amuva Noma Aveziwe
Usebenzisa umcibisholo okhombe Kwesobunxele noma Kwesokudla kuyi-remote yakho ye-Roku, bhekabheka imikhakha ehlukahlukene ezovela esiyingini. Umkhakha okhonjiwe uvela maphakathi ne-screen unesithombe, isihloko nencazelo emfushane. Cindezela u-OK ukuze ukhethe lowo mkhakha.
Amanye ama-video angase atholakale emikhakheni ehlukahlukene. Ngokwesibonelo, i-video ethi Indodana Yolahleko Iyabuya ingase itholakale emkhakheni othi ama-Movie, Umndeni nothi Intsha.
Uhlu ngalunye lwama-video lumelela ama-video ngokulandelana kwawo. Njengoba uzobe usebenzisa imicibisholo kuyi-remote yakho ye-Roku kuleli khasi, kuzovela i-Details Bubble ebonisa isihloko se-video ekhanyisiwe nokuthi idlala isikhathi eside kangakanani.
Imicibisholo ekhombe Phezulu noma Phansi: Uyisebenzisa uma ufuna ukuya komunye umkhakha. Izihloko zemikhakha zivela ngenhla kwendawo eyisiyingi.
Imicibisholo ekhombe Kwesobunxele naKwesokudla: Eyokubona ama-video akhona emkhakheni owodwa.
Icebiso: Indawo engenhla ngakwesokudla ibonisa ukuthi mangaki ama-video akulolo hlu nokuthi iyiphi i-video edlalayo ngaleso sikhathi.
Cindezela u-OK ukuze ukhethe i-video futhi ubone imininingwane yayo. Khetha okunye kwalokhu kuleli khasi:
Idlale: Dlala i-video kusukela ekuqaleni.
Idlale Iveze Amagama: Le ngxenye idlala kuphela uma ekhona amagama kuyi-video oyidlalayo. Ukukhetha le ngxenye kuyokwenza ukuba i-video idlale ibe ibhala amagama (uma ekhona) kuwo wonke ama-video asengxenyeni ethi Ezidlalayo noma kwethi Ama-Video Athandwayo. Uma ungasathandi ukuveza amagama, cindezela lapho kuthi khona Idlale Ingavezi Amagama.
Adlale Wonke Akulo Mkhakha: Dlala wonke ama-video akulo mkhakha, uqale ngedlala ngaleso sikhathi.
Phawula: I-video izoma ukudlala uma esedlale wonke akulowo mkhakha.
Uma udlala i-video engxenyeni ethi Ama-video Athandwayo, ungalawula ukudlala kwayo nge-remote ye-Roku ngale ndlela:
Pause: Misa i-video kancane. Phinde ucindezele lapha uma usufuna i-video iqhubeke.
Fast Forward: Qhubekela maphambili ne-video ngokushesha. Lapho umugqa obonisa ukuthi i-video isikuphi nokudlala ufika lapho ofuna iqale khona, cindezela inkinobho yokuyidlala.
Icebiso: Ungacindezela inkinobho yokuyidlulisa ngokushesha izikhathi eziningana ukuze usheshe ufike lapho ufuna khona.
Rewind: Buyela emuva uyiqale ekuqaleni i-video. Lapho umugqa obonisa ukuthi i-video isikuphi nokudlala ufika lapho ofuna iqale khona, cindezela inkinobho yokuyidlala.
Icebiso: Ungacindezela inkinobho yokuyibuyisela emuva izikhathi eziningana ukuze usheshe ufike lapho ufuna khona.
Umcibisholo Ongakwesokudla: Yisa i-video phambili ngemizuzwana eyishumi. Lapho umugqa obonisa ukuthi i-video isikuphi nokudlala ufika lapho ofuna iqale khona, cindezela inkinobho yokuyidlala.
Umcibisholo Ongakwesobunxele: Hlehlisa i-video ngemizuzwana eyishumi. Lapho umugqa obonisa ukuthi i-video isikuphi nokudlala ufika lapho ofuna iqale khona, cindezela inkinobho yokuyidlala.
Umcibisholo Okhombe Ezansi: Ubonisa imininingwane ephathelene ne-video imizuzwana embalwa. Phinde uchofoze wona ukuze ususe leyo mininingwane.
Umcibisholo Okhombe Phezulu noma Emuva: Owokubuyela ekhasini elinemininingwane ye-video.
Bukela Ama-Video Amasha
Ikhasi lokuqala leSiteshi Sokusakaza Se-JW liba nezinhlu ezimbili Zama-Video Athandwayo:
Okukhona: Uma le ngxenye ikhona, iyoba nama-video anezinto ezikhethekile, njengalawo aphathelene nemihlangano yethu yamasonto onke noma ukukhulekela komkhaya.
Ezamuva: Le ngxenye inama-video ayisithupha afakwe muva.
Landela izinyathelo ezilandelayo ukuze ukhethe i-video kowodwa wale mikhakha:
Khetha umkhakha ngokusebenzisa umcibisholo okhombe Phezulu noma Phansi.
Cindezela u-OK uma ufuna ukubon ama-video asemkhakheni owukhethile.
Sebenzisa umcibisholo okhombe Phezulu noma Phansi ukuze ubone wonke ama-video akhona.
Cindezela u-OK ukuze ukhethe i-video oyikhombile futhi ubone ikhasi elinemininingwane yayo.
Phawula: Khetha ingxenye ethi Zidlale Zonke Ezikulo Mkhakha ukuze uwadlale wonke ama-video asemkhakheni othile owukhethile.
Bukela Ama-Video Athandwayo Nge-Roku